काठमाडौंमा शनिबार बिहान हाइप्रोफाइल दुर्घटना ! (तस्वीर) - Dainik Nepal
काठमाडौंमा शनिबार बिहान हाइप्रोफाइल दुर्घटना ! (तस्वीर)
दैनिक नेपाल २०७५ चैत २ गते ८:०७
काठमाडौं, २ चैत । काठमाडौंको कमलपोखरी चोकमा शनिबार बिहान निजी कार र मिनी ट्रकबीच गम्भीर दुर्घटना भएको छ ।
शनिबार बिहान करीव साढे पाँच बजे गलत साइडबाट अनियन्त्रित रुपमा हुइँकिएर आएको निलो रंगको बा १३ च ८६६४ नम्बरको निजी कार बा ३ ख २३४२ नम्बरको मिनी ट्रकसँग ठोक्किएको हो ।
दुर्घटनापछि मिनी ट्रक नजिकै रहेको बिजुलीको पोलमा गएर ठोक्किएको छ । मिनी ट्रकका चालक घाइते भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी रामशाहपथले जनाएको छ ।
कारको अगाडिको भागपूर्ण रुपले क्षति भएको छ । दुर्घटना भएको सूचना पाउनेवित्तिकै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो ।